२३ वर्षपछि नेपाल साग फुटबल च्याम्पियन, भारत २–१ ले पराजित
माल्दिभ्समाथि सनसनी जित निकाल्दै नेपाल फाइनलमा
काठमाडौं: १२ औं साग अन्तर्गत गुहावाटीमा भइरहेको सेमिफाइनल खेललाई नेपालले १७ वर्षपछि साग फुटबलको फाइनलमा पुग्न सफल भएको छ । दोस्रो हाफदेखि ५५ मिनेटसम्म १० खेलाडीमा सीमित भएर पनि नेपालले ४-३ को नतिजा निकाल्दै भारतविरुद्धको फाइनल भिडन्त पक्का गरेको हो ।
अब 'किस' गर्नुअघि दुई पटक जिका भाइरसबारे सोच्नुस्
एजेन्सी : जिका भाइरसको बढ्दो आतंकका बीच ब्राजिलका वैज्ञानिकहरुले गर्भवती महिलालाई आफ्ना पति या अन्यसँग 'किस' नगर्न चेतावनी दिएका छन् । रोयटर्सका अनुसार जिका भाइरस अमेरिका र युरोपमा आतंक मच्चाइरहेका बेला वैज्ञानिकहरुले गर्भवती महिलाहरुलाई आफ्ना पति या अन्यलाई 'किस' गर्नुअघि दुई पटक सोच्न आग्रह गरेका छन् । गर्भवती महिलालाई विशेषज्ञहरुले कडा चेतावनी…
साग खेलकुदमा विशेषज्ञको नाम काटेर असम्बन्धित डाक्टरको हुल
काठमाण्डु, २४ माघ– खेलकुद चिकित्सा केन्द्रका खेल विशेषज्ञ चिकित्सक डा. राजु महर्जनको नाम काटेर १२ औं सागमा असम्बन्धित चिकित्सकलाई सहभागी गराइएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले पाटन अस्पतालका डा. नबिसमानसिंह प्रधान, टिचिङकी डा. रक्षा श्रेष्ठ र पोखरामा कार्यरत डा. चन्द्रबहादुर गुरुङलाई भारत लगेको छ । सागमा महिला खेलाडी धेरै छन्…
साग २०१६ : बंगलादेशलाई पराजित गर्दै नेपालको विजयी शुरुवात
काठमाडौं – नेपाली महिला फुटबल टोलीले बंगलादेशलाई पराजित गर्दै विजयी शुरुवात गरेको छ । १२ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद अन्तरगत शिलोङको जवहरलाल नेहरु रंगशालामा शुक्रबार भएको खेलमा नेपाल ३–० ले विजयी भएको हो । नेपाललाई जीत दिलाउने क्रममा खेलको दोस्रो मिनेटमा नै दिपा अधिकारीले गोल गरेकी थिइन् । त्यस्तै अनु…
क्वाटरफाइनलमा नेपाल बंगलादेशसँग भिड्ने
काठमाण्डु, १९, माघ– बंगलबादेशमा जारी यू–१९ विश्वकपको क्वाटरफाइनलमा नेपाल बंगलादेशसँग भिड्ने भएको छ । मंगलबार बंगलादेशले नामिबियालाई हराएपछि नेपाल बंगलादेशसँग भिड्ने पक्का पक्की भएको हो । यसअघि न्यूजिल्याण्ड र आयरल्याण्डलाई हराउँदै नेपाल क्वाटरफाइनलमा पुगेको हो । सोमबार भारतसँग ७ विकेटले पराजित भएपछि नेपाल समूह डी को उपविजेता बनेको हो । उपविजेता…
कास्की जिल्ला तेकोवन्दोको साधारणसभा सम्पन्न
पोखरा, १६ माघ । कास्कीजिल्ला तेकोवन्दो संघको ८ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । सो अवसरमा कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितीका अध्यक्ष यम गुरुङ्गले नियमित नभएका र झोलामा खेलकुद संस्था वोकेर हिडनेहरुलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन पहल गरिने वतोनुभएको छ । उनले भने “केवल केन्द्रिय प्रतिनिधी वन्नका लागिमात्र झोलामा खेलकुद संस्था…
नेपालको आयरल्याण्डमाथि ८ विकेटको शानदार जित
१६ माघ, काठमाडौं । यू-१९ विश्वकप क्रिकेटमा नेपालले सन्दिप लामिछानेको हृयाट्रिकको मदतमा आयरल्याण्डमाथि ८ विकेटको शानदार जित हात पारेको छ । लगातार दोस्रो जितसँगै नेपाल दोस्रो चरण नजिक पुगेको छ । अहिले भइरहेको अर्को खेलमा भारत न्यूजिल्याण्डलाई हराए नेपाल समूह चरणको अन्तिम खेल अघि क्वार्टरफाइनलमा पुग्नेछ । समूह चरणको अन्तिम खेलमा…
यो वर्षको विश्वप्रसिद्द हिमाली दौड मुस्ताङमा
माउन्टेन रेस अर्थात् हिमालका कन्दरा, काखमा रहेका गोरेटामा दगुरेर प्रसिद्दि कमाउने खेल । यो साहसिक खेल नेपालमा उति हुने गर्दैन जति बिदेशमा हुन्छ । युरोप र अमेरिकातिर यो अति प्रसिद्द छ । विश्वकै सर्बोच्च अग्ला हिमाल भएर पनि नेपालमा उति प्रसिद्द हुन नसकेको यो खेल बिस्तारै नेपालमापनि प्रसिद्द हुन खोज्दै…
उपाधी जित्ने खेलाडीलाई ५-५ लाख
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)ले बंगबन्धु गोल्डकल्प जितेको नेपाली टिमका सबै खेलाडीलाई ५–५ लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ । टिमका २३ खेलाडी दुई प्रशिक्षक (बालगोपाल महर्जन र उपेन्द्रमान सिंह) र एक चिकित्सकले ५–५ लाख रुपैयाँ पाउने छन् । एन्फाका कार्यबहाक अध्यक्ष नरेन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘२३ वर्षपछिको यो जितले…
देउवा र मोदीबीच आज विस्तृत छलफल, आज के–के छ कार्यक्रम ?
२०१६ मा साहरुखलाई ३६ करोड घाटा
आयोजनाका लागि थप जग्गा अधिग्रहण गरिने
साउथ इन्डिया र सुदुरपश्चिमको फ्युजन, ‘रणवीर’ (फोटो फिचरसहित)